Semalt Expert - Ahoana no tsy handratra amin'ny dokam-barotra Google?
Mivezivezy amin'ny mailaka ny mailaka malaky, izay misy olona fantatrao amin'ny mpandefa anao, dia mandefa anao hiditra amin'ny rohy Google Doc. Ny fampidirana ny rohy dia mampiseho anao any amin'ny tontolo tsy fahampiana. Noho izany dia azo atao ny mamafa ny mailaka.
Ryan Johnson, iray amin'ireo manam-pahaizana manerantany avy amin'ny Semalt Digital Services, dia mizara ny traikefa momba ny fiarovana amin'ny Google Docs.
Ny mailaka dia tsy tonga avy amin'ny olona izay eritreretinao fa avy, fa raha tokony hoe, mailaka phishing izany amin'ny fikasana hamitaka anao mba hanindriana ny rohy. Ny zava-drehetra dia gimmick izay mikendry ny hampisehoana ny fanalahidin'ny kaonty Gmail amin'ny phisher. Ny tranga ratsy indrindra dia ny an'i John Podesta, Lohan'ny Komitim-pirenen'ny Demokratika, izay nanana ny resany manontolo tamin'ny adiresy imailaka taorian'ny fialany tao amin'ny fandrika.
Taorian'ny fisehoan-javatra maromaro dia namaly i Google tamin'ny alalan'ny fepetra fiarovana mba hiarovana ny mpampiasa azy amin'ny mailaka mandingana ny Google Docs. Ny orinasa dia nanala ireo kaonty manafintohina rehetra, nanaisotra pejy sandoka ary nanosika ny fanavaozam-baovao tamin'ny alàlan'ny fanaraha-maso azo antoka. Google dia manentana ny mpampiasa hitatitra ny endri-tsoratra rehetra ao amin'ny Gmail.
Ny fepetra fisorohana maromaro dia mikendry ny hampitsahatra ny fiparitahan'ny fanafihana phishing, na dia nahavita nanimba ny adiresy imailaka an-tapitrisa aza ny mpanafika, ireo kaonty Gmail momba ny kaonty mifandraika..
Niparitaka be ireo mpampiasa ny kaonty Google ao anatin'ny kaonty Google. Ireo hackers izay mitondra fifandraisana marina dia nahavita nandefa antontan-taratasy ratsy tamin'ny fitoviana amin'ny PDF PDF. Na izany aza, dia misy fomba azo itokisana mba hiarovana ny tenanao amin'ny loza. Ataovy azo antoka fa nahafahanao namorona ny mari-pahaizana roa fanalahidy amin'ny kaonty Google rehetra ianao. Ny fanaovana izany dia manampy amin'ny famelezana ireo hackers satria tsy ho vitan'izy ireo ny handalo ny fanamarinana ny code faharoa, indrindra amin'ny alalan'ny SMS. Hahafantatra sy hampahafantatra hatrany ny Gmail rehefa misy olona miezaka hahazo ny kaontinao.
Raha toa ka manindry ny rohy maloto ianao dia afaka miditra ao amin'ny pejin-tranonkalanao fitadiavanao Gmail ary manaisotra ny fidirana amin'ny rindrambaiko rehetra, anisan'izany ny apps fox Google Docs.
Namoaka fanambarana manaraka momba ny filazana i Google. Nolazain'izy ireo momba ny fahalalany mikasika ny fiarovana ny kaonty Google ary namoaka fanazavana tanteraka taorian'ny fanadihadiana lalina. Ny orinasa dia nandray fepetra mba hiarovana ny mpampiasa azy ireo amin'ny hetsika fanentanana an-tserasera izay misintona ny Google Docs, izay niharan'ny lahatsary Gmail maherin'ny 0.1%. Google dia afaka namarana ny fanentanana mampihoron-koditra tao anatin'ny adiny iray. Ny kaonty ihany no nifampizarana sy niparitaka noho ny tranga. Ny fanadihadiana dia nampiseho fa tsy nisy ny angona hafa noporofoina. Amporisihina àry ny mpampiasa tsy handray fepetra hafa momba ny tranga. Na izany aza, ny mpampiasa dia naverina handefa ny fangatahan'ny antoko fahatelo amin'ny alalan'ny fitsidihana ny rohy Google Security Checkup .
Tsy tokony hanamboatra ny fametahana sy ny fisidinan'ny rohy na dia toa misy olona fantatrao aminao aza. Raha tsy manantena hafatra ianao, dia makà fotoana handinihina ny URL raha toa ka misy mpamoaka lahatsoratra tsotra na fanamarinana indroa avy amin'ny manam-pahaizana amin'ny alàlan'ny fomba hafa fifandraisana Source .